Welcome to baidoanews.com | Bari :Suldaan lagu toogtey Magaalada Boosaaso.
Bari :Suldaan lagu toogtey Magaalada Boosaaso.
Saturday February 02, 2013 - 14:02:43 in Wararka by
Wararka hada naga soo gaaraya dhanka Gobalka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in maanta Kooxo hubeysan Magaalada Boosaaso ay ku dileen mid ka mid ah nabadoonada ugu caansan deegaanada Maamulka Puntland.
Suldaanka la diley ayaa waxaa lagu magacaabaa Muuse Faarax Muuse waxaana kooxaha dableyda ah ay ku toogteen Bartamaha magaalada Boosaaso ee Gobalka Bari,waxaana lasoo sheegayaa in dilka kadib kooxaha ay goobta ka baxsadeen islamarkaana ciidamo ay soo gaareen Goobta.
Ciidamada Maamulka Puntland ayaa waxaa ay haatan Magaalada Boosaaso ka wadaan Howlgalo balaaran oo lagu raadinayo kooxihii ka danbeeyay dilka Suldaan Muuse oo maanta lagu toogtey Magaalada Ganacsiga leh ee Boosaaso,iyadoona ilaa iyo hada aan la ogeyn sababta loo diley.
Xaalada Magaalada Boosaaso ayaa aad u kacsan haatan waxaana meelaha xaafadaha lagu arkayaa ciidamo ka tirsan maamulka oo ku raad jooga kooxaha falka Weerarka ah geystay,waxaana sidoo kale aaney jirin wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Puntland.